कोभिशिल्ड – Himalaya Television
तत्काल कोभिशिल्ड खोप खरिद गर्ने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रष्टिकरण
२४ वैशाख २०७८ काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल थप कोभिशिल्ड खोप खरीद गर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर अहिलेको अवस्थामा भारतबाट थप कोभिशिल्ड खोप खरीद गर्नसक्ने अवस्था नरहेको जानकारी...
भारतले लगायो कोरोनाविरुद्धको खोप ‘कोभिशिल्ड’ निर्यातमा अस्थायी रोक
१२ चैत २०७७ नयाँ दिल्ली । भारतले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन ‘कोभिशिल्ड’ निर्यातमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतमा अक्फोर्ड–एस्ट्राजेनेकाद्वारा विकसित कोभिशिल्ड भ्याक्सिन निर्यातमा अस्थायी रोक लगाइएको हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले भारतमै कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले तत्काललाई...
ढुक्क भएर कोरोनाविरुद्धको ‘कोभिशिल्ड’ खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध
१७ माघ २०७७ काठमाडौं । कोभिड–१९ विरुद्धको ‘कोभिशिल्ड’ खोप लगाउँदा सामान्य असर देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले खोप लगाएपछि व्यक्तिमा खोपले सामान्य असर देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ती व्यक्तिमा देखिएको असर...
५ माघ २०७७ नयाँ दिल्ली । भारतमा कोरोनाविरुद्धका खोप लगाएकाहरु बिरामी पर्न थालेका छन् । भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म कोरोनाविरुद्धका खोप लगाएकामध्ये ४ सय ४७ जनामा खोपको साइड इफेक्ट देखिएको पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयले हिजो पत्रकार सम्मेलन...
कोभिशिल्डलाई किन अनुमति दिइयो ? नेपालमा कहिले आउँछ र कति पर्छ ? (भिडियो)
२ माघ २०७७ काठमाडौं । सरकारले भारतमा बनेको कोरोना विरुद्धको खोपलाई किन अनुमति दियो र यो खोप कहिलेसम्म नेपालमा आउँछ तथा यसको मूल्य कति पर्छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले औषधी व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीसँग...